कोरोना फैलिन नदिन दक्षिण कोरियाले अपनाएका ५ उपाय ! – Sagarmatha Online News Portal
कोरोना फैलिन नदिन दक्षिण कोरियाले अपनाएका ५ उपाय !
काठमाडौं । एक महिना अघिसम्म तीव्र गतिमा कोरोना भाइरस फैलिएको मुलुक थियो, दक्षिण कोरिया । त्यहाँ एउटा चर्चबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको थियो ।
यो समाचार सामग्री तयार पार्दासम्म दक्षिण कोरियामा जम्मा ९ हजार ३७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । त्यहीकारण दक्षिण कोरियाली प्रधानमन्त्री चुङ स्ये क्युनले देशमा संकटकालीन अवस्था आएको टिप्पणी गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमण देखिएका क्षेत्र डेगु र चङ्डोलाई ‘विशेष हेरचाह क्षेत्र’ घोषणा गरिएको छ । यी क्षेत्रबाहेक अन्यत्र दक्षिण कोरियाको जनजीवन सामान्य छ । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार अर्थतन्त्र बन्द नगरीकन पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ दक्षिण कोरियाबाट सिक्नुपर्छ ।
ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिए पनि अन्यत्रको जस्तो ठूलो ‘लकडाउन’ नगरीकनै दक्षिण कोरियाले कोरोना नियन्त्रणमा लिएको छ । त्यहीकारण कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको संख्या १० हजार पनि नाघ्न सकेको छैन ।
आखिर दक्षिण कोरियाले त्यस्तो के गर्यो, जसका कारण दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसको संक्रमण त्यति साह्रो फैलिन पाएन ?
दक्षिण कोरियाले कोरोना संक्रमणलाई थप फैलिन नदिन अपनाएका उपाय निम्नबमोजिम छन्
संकट आउनुअगावै हस्तक्षेप
जनवरीको अन्तिमतिर कोरोना संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएपछि कोरियाले स्वास्थ्यकर्मीसँग घनीभूत संवाद गर्यो । त्यसक्रममा कोरोना जाँच गर्ने ‘किट’ ठूलो संख्यामा उत्पादन गर्ने निर्णय भयो ।
लगत्तै दैनिक १ लाख कोरोना जाँच गर्ने किट उत्पादन हुन थाल्यो । दक्षिण कोरिया ती किट अहिले अन्य देशमा निर्यात गर्ने तयारीमा समेत लागेको छ ।
छिटो र धेरै जाँच
दक्षिण कोरियाले कोरोना जाँच गर्ने किट अत्यधिक संख्यामा त उत्पादन गर्यो नै, अन्य देशको तुलनामा कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा धेरै मानिसमा परीक्षण पनि गर्यो ।
प्रतिव्यक्ति दरले भन्ने हो भने अमेरिकाको तुलनामा दक्षिण कोरियाले ४० गुणा बढी मानिसमा परीक्षण गरेको थियो । २३ मार्चसम्म उसले ३ लाखभन्दा बढी मान्छेको परीक्षण गरिसकेको छ । धेरै मानिसमा परीक्षण गर्दा संक्रमण फैलिए–नफैलिएको छिटो जानकारी पाउन मद्दत पुग्यो ।
सम्पर्क ट्र्यासिङ, आइसोलेसन र निगरानी
कोरोना संक्रमण देखिएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति छिटोभन्दा छिटो पत्ता लगाउने, तिनको जाँच गर्ने, आइसोलेसनमा राख्ने र शंकास्पद व्यक्तिलाई निगरानीमा राख्न दक्षिण कोरियाले आफ्नो इपिडिइमियोलोजी सेवालाई प्रहरीको अनुसन्धान शैली जसरी नै प्रयोग गर्यो ।
‘जिपिएस’द्वारा फोन ट्रयाक
कुनै पनि क्षेत्र र जिल्लामा संक्रमित देखिएमा त्यो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने सबै व्यक्तिको फोनमा सूचना पठाइयो । र, शंका लागेमा परीक्षणका लागि आउन भनियो । वासिंगटन पोष्टका अनुसार संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम’ (जिपिएस) बाट फोन ट्रयाक गरियो ।
संक्रमित व्यक्ति परीक्षण हुनुअघि कहाँ गएको थियो भनेर सार्वजनिक वेबसाइटमार्फत जानकारी दिइयो । यसले गर्दा मान्छेलाई परीक्षण गराउन सहज भयो ।
दक्षिण कोरियासँग सार्वजनिक स्थलमा तापक्रम मापक यन्त्र धेरै छैनन् । स्वास्थ्यकर्मी पनि धेरै छैनन् । तर, उनीहरूले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट कोरोना सचेतना जानकारी गराइरहे । बारम्बार जनतालाई परीक्षणका लागि आग्रह गरे । लकडाउन गरिएका दुईवटा सहरका जनताको आवश्यकता सोधिरहे ।
यसैको परिणाम हो, अहिले दक्षिण कोरियामा दैनिक १५ हजारले कोरोना भाइरसको संक्रमण भए–नभएको परीक्षण गर्ने गरेका छन् । दक्षिण कोरियाको मोडलबाट प्रभावित भएकैले हो, विश्व स्वास्थ्य संगठनले बारम्बार भनिरहेको छ, ‘कोरोनाको परीक्षण गरौँ, कोरोनाको परीक्षण गरौँ, कोरोनाको परीक्षण गरौँ ।’
Published On: ११ चैत्र २०७६, मंगलवार